Ihe ị ga-eme? - www.yomelijah.com
"Onye maara ihe nke hụrụ ọdachi "agawo" zoo; ndị na-amaghị ihe, bụ́ ndị nọ na-aga, atawo ahụhụ si na ya pụta"
Ka oke mkpagbu na-erute, ọdachi,
gịnị ka anyị ga-eme iji jikere?
Nkwadebe nke mmụọ tupu oke mkpagbu ahụ
"Ee, ọ ga - eme na onye ọ bụla nke na - akpọku aha Jehova ga - anọkwa na ntanetị"
Enwere ike ichikota nkwadebe a tupu otu okwu: Chọọ Jehova:
"Tupu ụkpụrụ emezuo, tupu ụbọchị unu agabiga dị ka igbogbo ọka, tupu ọnụma Jehova abịakwasị unu, tupu ụbọchị iwe Jehova abịakwasị unu, chọọnụ Jehova, unu niile ndị dị umeala n’obi bi n’ụwa, ndị meworo ihe o kpere n’ikpe. Chọọnụ ezi omume, chọọnụ ịdị umeala n’obi. Ma eleghị anya, a ga-ezobe unu n’ụbọchị iwe Jehova” (Zefanaya 2: 2,3). Seekchọ Jehova ọ bụ ịmụta ịhụ ya n'anya na ịmara onye.
Lovehụ Chineke n'anya bụ ịnabata na O nwere aha: Jehova (YHWH) (Matiu 6:9 “Ka edo aha gị nsọ”).
Jehova chọrọ ka ndị mmadụ mara aha ya
Dị ka Jizọs Kraịst mere ka ọ pụta ìhè, iwu kachasị mkpa bụ ịhụnanya maka Chineke: "O wee sị ya: “‘Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.’ Ọ bụ ya bụ iwu kasị ukwuu, bụrụkwa nke mbụ” (Matiu 22:37,38).
Anyị kwesịrị ịmara nkuzi nke Akwụkwọ Nsọ iji mara Chukwu ma hụ Ya n'anya (nke e dere n'asụsụ Igbo)
Ima ima Abasi ebe ke akam. Jizọs Kraịst nyere ndụmọdụ n’ezie n’ekpere nke Matiu 6: "Mgbe unu na-ekpekwa ekpere, unu adịla ka ndị ihu abụọ; n’ihi na ọ na-atọ ha ụtọ iguzo n’ụlọ nzukọ, na ebe ụzọ nwere ngalaba na-ekpe ekpere ka ndị mmadụ wee na-ahụ ha. N’ezie, ana m asị unu, Ha enwetazuwo ụgwọ ọrụ ha. Ma, gị onwe gị, mgbe ị na-ekpe ekpere, banye n’ọnụ ụlọ gị, mgbe i mechisịrị ọnụ ụzọ gị, kpekuo Nna gị nke nọ na nzuzo ekpere; Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụ gị ụgwọ. Ma mgbe ị na-ekpe ekpere, ekwughachila otu ihe ugboro ugboro, dị ka ndị mba ọzọ na-eme, n’ihi na ha na-eche na a ga-anụ olu ha n’ihi ọtụtụ okwu ha na-ekwu. Ya mere, unu emela ka ha, n’ihi na Chineke bụ́ Nna unu maara ihe ndị na-akpa unu+ tupu unu arịọ ya. “Ya mere, kpeenụ ekpere otú a: “‘Nna anyị nke bi n’eluigwe, ka e doo aha gị nsọ. Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe. Nye anyị nri taa maka ụbọchị taa; gbaghara anyị ụgwọ anyị ji, dị ka anyị gbaghakwaara ndị ji anyị ụgwọ. Ekwela ka anyị daba n’ọnwụnwa, kama napụta anyị n’aka ajọ onye ahụ.’ “N’ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị mmadụ njehie ha, Nna unu nke eluigwe ga na-agbagharakwa unu; ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị mmadụ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu njehie unu" (Matiu 6:5-15).
Anyị kwesịrị ife naanị Jehova bụrụ nanị: "Ee e; kama ihe m na-ekwu bụ na ihe ndị mba ọzọ na-achụ n’àjà, ha na-achụrụ ya ndị mmụọ ọjọọ, ọ bụghị Chineke; achọghịkwa m ka unu bụrụ ndị ha na ndị mmụọ ọjọọ na-emekọ ihe. Unu apụghị ịdị na-aṅụ iko Jehova na iko ndị mmụọ ọjọọ; unu apụghị ịdị na-eri na “tebụl Jehova” na-erikwa na tebụl ndị mmụọ ọjọọ. Ka “ànyị na-akpali Jehova ikwo ekworo”? Ànyị ka ya ike?" (1 Ndị Kọrịnt 10: 20-22).
Naanị anyị kwesịrị ikpegara Jehova Chineke ekpere
Lovehụ Chineke n'anya bụ ịnabata na O nwere Ọkpara, Jizọs Kraịst. Anyi aghaghi ihu ya n’anya ma nwee okwukwe n’onyinye ya nke n’eme ka ngbaghara nke nmehie anyi. Jizọs Kraịst bụ naanị ụzọ maka ndụ ebighi ebi ma Chineke chọrọ ka anyị mata ya: "Jizọs wee sị ya: “Ọ bụ m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ"; " Iji nweta ndụ ebighị ebi, ọ dị ha mkpa ịmata gị nke ọma, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere, bụ́ Jizọs Kraịst" (Jọn 14:6; 17:3).
Jizọs Kraịst bụ naanị ụzọ maka ndụ ebighi ebi
Iwu nke abụọ dị mkpa, dị ka Jizọs Kraịst si dị, bụ ka anyị hụ onye agbata obi anyị n'anya: "Nke abụọ, nke dị ka ya, bụ, ‘Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.’ Ọ bụ n’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na akwụkwọ Ndị Amụma dabeere" (Matiu 22:39,40). "Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’etiti onwe unu" (John 13:35). Ọ bụrụ n’anyị hụrụ Chineke n’anya, anyị kwesịrị ịhụ onye agbata obi anyị n’anya: “Onye na-enweghị ịhụnanya amaghị Chineke, n’ihi na Chineke bụ ịhụnanya” (1 Jọn 4:8).
Jizọs Kraịst machibidoro ịkpọasị, igbu ọchụ mmadụ n'ihi ihe ndị ịhụ obodo n'anya ma ọ bụ ịhụ mba n'anya okpukpe (Matiu 26:52; 1 Jọn 3:15)
Ọ bụrụ na anyị hụrụ Chineke n'anya, anyị ga-achọ ime ihe na-atọ ya ụtọ site n'inwe ezi omume: “Gị mmadụ, ọ gwawo gị ihe dị mma. Gịnị ka Jehova na-achọ n’aka gị ma ọ́ bụghị ime ihe n’ikpe ziri ezi na ịhụ obiọma n’anya nakwa iji obi umeala soro Chineke gị na-eje ije?" (Maịka 6:8).
Ọ bụrụ n’anyị hụrụ Chineke n’anya, anyị ga-ezere inwe ụdị omume ọ kpọrọ asị: “Gịnị? Ọ̀ bụ na unu amaghị na ndị ajọ omume agaghị eketa alaeze Chineke? Unu ekwela ka e duhie unu. Ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, ma ọ bụ ndị bụ́ di ma ọ bụ nwunye na-akwa iko, ma ọ bụ ndị ikom ndị na-ekwe ka ndị ikom dinaa ha,+ ma ọ bụ ndị ikom na-edina ndị ikom, ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu,+ ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị na-ekwujọ mmadụ, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, agaghị eketa alaeze Chineke” (1 Ndị Kọrịnt 6:9,10).
Bible katọrọ ụfọdụ omume (akụkụ nke abụọ) (nke e dere n'asụsụ Igbo)
Lovehụ Chineke n’anya bụ ịmata na Ọ na-eduzi anyị site n’okwu Ya Akwụkwọ Nsọ. Anyị ga na-agụ ya kwa ụbọchị iji mara Chineke na nwa ya nwoke Jizọs Kraịst. Akwụkwọ Nsọ bụ ntụzi-aka nke Chineke nyere anyị: "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, ọ bụkwa ìhè n'ụzọ m" (Abụ Ọma 119: 105). A na-achọta Akwụkwọ Nsọ ntanetị na saịtị ahụ na ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ iji rite uru na nduzi ya (Matiu isi 5-7: Okwuchukwu dị n’elu ugwu, akwụkwọ Abụ Ọma, Ilu, Oziọma anọ ahụ Matiu, Mak, Luk na Jọn na otutu akwukwo ndi ozo (2Timoti 3: 16,17)).
Anyị ga na-agụ Baịbụl kwa ụbọchị
Anyị kwesịrị iru ntozu okè ime mmụọ
Ihe ị ga-eme n’oge oke mkpagbu
Dabere na Bible, e nwere ọnọdụ ise dị mkpa ga-enyere anyị aka inweta ebere nke Chineke n'oge oke mkpagbu:
1 - Vokekpọku aha Jehova site n’ekpere: “Ee, ọ ga - eme na onye ọ bụla nke na - akpọku aha Jehova ga - anọkwa na ntanetị” (Joel 2: 32).
2 - Inwe okwukwe na aja nke Kraist ka ewe nweta ngbaghara nke mmehie: "Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m, ma, lee! oké ìgwè mmadụ, nke onye ọ bụla na-enweghị ike ịgụta ọnụ, ndị si ná mba niile na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta, ka ha guzo n’ihu ocheeze ahụ nakwa n’ihu Nwa Atụrụ ahụ. Ha yi uwe mwụda na-acha ọcha; ha jikwa igu nkwụ+ n’aka. (...) M wee sị ya ozugbo: “Onyenwe m, ọ bụ gị onwe gị maara.” O wee sị m: “Ndị a bụ ndị si n’oké mkpagbu ahụ pụta, ha asawokwa uwe mwụda ha, meekwa ka ọ na-acha ọcha n’ime ọbara Nwa Atụrụ ahụ" (Nkpughe 7:9-17). Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na oke igwe mmadụ ahụ ga-alanarị oké mkpagbu ahụ ga-enwe okwukwe n'ichekwa ọbara nke ọbara Kraịst maka mgbaghara mmehie.
Anyị ga na-echeta ọnwụ Jizọs Kraịst kwa afọ (nke e dere n'asụsụ Igbo)
Oké mkpagbu ahụ ga-abụrụ ụmụ mmadụ ihe mwute: Jehova ga-arịọ maka “oge ịkwa arịrị” maka ndị ga-alanarị oké mkpagbu ahụ.
3 - Ọkwa ákwá banyere ọnụ ahịa Jehova ga-akwụ iji mee ka anyị dị ndụ: ndụ mmadụ nke na-enweghị mmehie nke Kraịst: “M ga-awụsa ụlọ Devid, wụsakwa ndị bi na Jeruselem mmụọ amara+ na nke arịrịọ, ha ga-elegide anya n’Onye ahụ ha mara ube, ha ga-etikwara Ya mkpu arịrị otú a na-eti n’ihi ọnwụ nke nwa nwoke a mụrụ naanị ya; ha ga-akwara ya ákwá arịrị dị ilu dị ka mgbe a na-akwa ákwá arịrị dị ilu n’ihi ọnwụ nke nwa e bu ụzọ mụọ. N’ụbọchị ahụ, mkpu arịrị a ga-eti na Jeruselem ga-adị ukwuu, dị ka mkpu arịrị e tiri na Hedadrimọn nke dị na ndagwurugwu Megido” (Zekaraia 12:10,11).
Oké mkpagbu ahụ bụ oge Jehova ga-eweta usoro ihe ụmụ mmadụ nọ ugbu a
Njedebe nke ịhụ mba n'anya
Dị ka akụkụ nke ịkwa arịrị a, Jehova Chineke ga-eme ebere mmadụ ndị kpọrọ ajọ usoro a asị, n’Ezikiel 9: “Jehova wee gaa n’ihu ịsị ya: “Gagharịa n’ime obodo a, n’ime Jeruselem, kaa ndị na-eze ume ma na-asụ ude n’ihi ihe arụ niile a na-eme n’ime ya akara n’egedege ihu” (Ezikiel 9: 4; Luk 17:32).
A ga-enwe oke igwe mmadụ ndị ga-alanarị mkpagbu ahụ, nke ga-anọchi anya otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe a kpọrọ mmadụ dị ugbu a dịka amụma ndị dị na Zekaraya 13: 8 na Mkpughe 7:9-17
4 - Ibu onu: “Fụọnụ opi na Zayọn. Kwuonụ ka e nwee obubu ọnụ dị nsọ. Kpọọnụ òkù ka e nwee nzukọ ukwu. Kpọkọtanụ mmadụ niile. Doonụ ọgbakọ ahụ nsọ. Kpọkọtanụ ndị agadi. Kpọkọtanụ ụmụaka na ndị na-aṅụ ara” (Joel 2: 15,16, isi okwu nke ederede a bụ “oke mkpagbu” (Joel 2:1,2)).
5 - Zere inwe mmekọahụ: "Ka nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ si n’ọnụ ụlọ ya nke dị n’ime pụta, ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ sikwa n’ụlọ ndina ya pụta" (Joel 2: 15,16). “Ọpụpụ” nke di na nwunye nke a bụ zere inwe mmekọahụ. "ezinụlọ niile fọdụrụnụ, n’ezinụlọ n’ezinụlọ, na ndị inyom ha naanị ha" (Zekaraia 12: 12-14). Nkebi ahịrịokwu "nwanyị ha iche" bụ zere inwe mmekọahụ.
Ihe ị ga-eme ma oké mkpagbu ahụ gachaa
Iwu abụọ dị na Chineke dị:
1 - Usọrọ mee kọọ banyere ọbụbụeze Jehova na “nnwere onwe nke mmadụ: "Ọ ga-erukwa na onye ọ bụla nke fọdụrụ n’ime mba niile ndị na-ebuso Jeruselem agha ga na-agbago site n’afọ ruo n’afọ ịga kpọọrọ Eze, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, isiala, na ime ememme ụlọ ndò” (Zekaraia 14:16).
2 - Ihicha nke uwa rue ọnwa asaa, mgbe oke mkpagbu gasịrị, rue 10 “nisan” (ọnwa kalenda nke ndị Juu) (Ezikiel 40: 1,2): “Ndị ụlọ Izrel ga-eli ha iji mee ka ala ha dị ọcha, ruo ọnwa asaa” (Ezikiel 39:12).
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ma ọ bụ chọọ ozi ndị ọzọ, egbula oge ịkpọtụrụ saịtị ma ọ bụ akaụntụ Twitter nke saịtị ahụ. Ka Chineke gọzie obi dị ọcha site n’aka Ọkpara Ya Jizọs Kraịst. Amen (Jọn 13: 10).